Anapa - a ndawo idume ngokudla Imikhaya enezingane ezisencane. Kukhona zonke izimo ngoba ukhululekile futhi ephephile ebhishi ngamaholidi: ugu ububanzi, olunesihlabathi, kokwehla mnene emanzini, ukujula encane ngisho ne impela kude nasolwandle, ukuzijabulisa mass. Futhi ukuze uthole Anapa ngezithukuthuku inethiwekhi ezokuthutha evuthiwe oluphakeme elula. Lokhu kungenziwa kokubili ngendiza kanye ngesitimela, ngebhasi noma imoto yangasese. Mhlawumbe, kuba abaseduze lolwandle resort ensimini ka-Russia, okuyinto ebaluleke kangaka endabeni iholide ne izingane.
Anapa, ngokuba edolobheni spa, inganikeza ezihlukahlukene ongakhetha yokuhlala, esukela ethonyeni eliyingozi elula yokuzinakekela, njengokushintsha egunjini elincane ezizimele, ziphethe imfashini. Indlela ukukhetha - kukuwe izivakashi kuphela. Indlu yetivakashi "Izintandokazi Beach" kungabonakala iminikelo eminingi izivakashi. Kusobala ukuthi izivakashi bengakunaki ihhotela ngokwayo, amakamelo olunikezwa isevisi, uma ucabangela ukuthi ingxenye enkulu yokuphila kwazo bachitha olwandle. Kodwa kholwa kimi: ihhotela kungonakalisa iholide yakho nangawo wonke umbono komuzi, ngakho uya kukhethwa ongakhetha ezingaba ngangokunokwenzeka unake ukuqonda. Siphakamisa cabanga isivakashi indlu 3 * "Izintandokazi Beach" (Anapa) ngaphezulu.
Anapa, njengoba indawo edolobheni ezinkulu, izivakashi eziningi. Uma ufuna ukuba kude umsindo befuna, kodwa hhayi ukulahlekelwa ngale ukufinyelela cala ingqalasizinda the resort, kufanele sinake endlini isivakashi "Izintandokazi Beach 3 *" (Russia, Anapa), ngoba alikho idolobha, futhi wakhe Emaphethelweni - Dzhemete. Ihhotela usesikhundleni evumayo isikhundla kuyiphi zonke izindawo ingqalasizinda engafinyelelwa by zokuthutha umphakathi, eziningi zazo futhi bonke ngaphakathi ukuhamba ibanga. Izivakashi nezingane ngokuqinisekile bayakwazisa Budebuduze naleli ipaki amanzi, imizuzu 7-10 kuphela ukuhamba - futhi ulapho.
"Izintandokazi Beach" - guest house, okungase ngokuthi mini-ehhotela. Futhi zonke ngoba isibalo amakamelo imelelwa ingqikithi 26 amakamelo lwezigaba ezahlukene: samakamelo ahamba ngamabili kanye kathathu ejwayelekile, amakamelo aphakeme, kanye amakamelo yokuhlukanisa-level nge Ikhishi.
Kwelinye igumbi ngalinye, kungakhathaliseki esigabeni sayo, has a yokugezela yangasese, satellite TV, air conditioning, ukuhlinzeka thunzi egumbini, iketela futhi ucingo. Ifenisha emakamelweni has a embhedeni, eliseceleni kombhede amatafula - isimo ingaphezu elula. Zonke izivakashi bangabheka phambili kuvulandi encane nge dryer ufuna izingubo zokugqoka. Yiqiniso, uma izivakashi zijwayele sokunethezeka, namakamelo abanzi nge umhlobiso yesimanje, ifenisha entsha - lokhu akuyona neze inketho yakho. Ifenisha awumusha, bakudala, kodwa ukhululekile ngokwanele. konke Wayenesizotha futhi elula - Ilungiselelo lokuhlukaniswa amakamelo akuzona Ochwepheshe iqhaza.
Abavakashi ukuseviswa art bayokwazisa; Yebo, akusiyo entsha, kodwa ngezinye 100% ukuze ubhekane ngokuphumelelayo yemfanelo obusebenzayo eyabelwe yona. Nokho - emgwaqweni ngempela ezinomsindo futhi ephapheme, kodwa okwanele ukuvala umnyango kuvulandi, egumbini kukhona ukuthula nokuzola. Zonke izivakashi uthi kakhulu umsindo ngabodwa ukuvumela ubuthongo futhi uphumule.
Indlu yetivakashi "Izintandokazi Beach", njengabanye amahhotela kakhulu futhi izindlu zezihambi e Anapa, ukubhalisa ukuhlola emva 12:00, hlola - kufika emahoreni angu-12. beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abaningi bathi abasebenzi unesizotha futhi banobungane, akekho izohamba izivakashi yokulala emgwaqeni, futhi, ekutholakaleni.
Uma ufuna inketho engabizi for ukuhlala kwakho ku Anapa, lesikahle ngawe kungaba "Izintandokazi Beach" (guest house 3 *). Anapa - idolobha izivakashi, ngakho ingqalasizinda yayo igxile iholide. Noma kunjalo, bonke abanye babeyogijimela ezinye izinzuzo impucuko, ngaphandle kokushiya isayithi.
Ngakho, indlu isivakashi "Izintandokazi Beach" ukunikela bonke abavakashi anganqamuki kuqashelwe yokupaka. Banikezwe iqiniso lokuthi abantu abaningi afike olwandle phezu imoto siqu, abe nenkinga ngokuqaphela yokupaka zokuthutha kuyoba ibhonasi nice.
Ngesikhathi reception for imali eyengeziwe, noma ubani angaba ngokunenzuzo ephephile ukugcina amadokhumenti wakho, ama eziyigugu kanye nemali. Indlu isivakashi lincane kakhulu, kodwa ifakwe ikheshi, ngakho lapha ungakhululeka nabantu abakhubazekile.
Intengo sisehhotela kuhlanganisa zonke ukudla, ihlelwe ekamelweni lokudlela ngaphansi "lezitsha". Imenyu akuyona zahlukahlukene kakhulu, kodwa alambe ngokuqinisekile kungabikho muntu. Yiqiniso, kungcono zokufika kusenesikhathi uma izitsha ethulwa uhla egcwele, uma kungenjalo isengozini kuphela ingxenye encane ukunambitheka awukudla. Ezinye izivakashi ukuqasha amakamelo nge ekhishini, ngakho bayakwazi ukulungisa ukudla yabo. Thenga imifino, izithelo, inyama kungaba emakethe yendawo futhi kule esitolo sendawo. Uma kungekho izinketho ingabe engavumelani nawe, ungahlala sidla ukudla kwasekuseni, kwasemini kanye dinner kwelinye zokudla zendawo. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba kusukela endlini oyisivakashi ine cafe kakhulu lapho nawe ungadla elishibhile.
guest house Izibuyekezo "Izintandokazi Beach" kunalokho eziphikisa, yingakho kubalulekile ngakho ukuhlola isevisi ukuthi banganikeza abahambi. Esizeni unikezelwe ukufinyelela ijubane eliphezulu Inthanethi engenantambo. Amandla esiginali - indaba ehlukene. On lonke ihhotela banikezwe ingqikithi 7 zokungena, ngakho awawabheki ayimi traffic. Campers esekhala isignali ngakanye, abampofu inthanethi. Yiqiniso, uma ungenawo ukucabanga ngokuphila kwabo ngaphandle Internet, ungumsebenzisi osebenzayo, une Esimweni esinjalo akunakwenzeka ukuba isudi, kodwa ukuthumela ambalwa imiyalezo ngosuku, ukuthi kwanele.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke. Ngesikhathi reception ungakwazi oda isevisi itekisi Shuttle esikhumulweni sezindiza noma isitimela esiteshini, ukuya ohlelweni resort uhambo. Ukuze uthole imali eyengeziwe, ungakwazi ukusizakala service izingubo bese uqinise izinto zabo.
Ezinye izivakashi akhononde inhlangano abampofu kwabasebenzi, noma kunalokho on abasebenzi amancane: amakamelo bahlanza ngokushesha, amashidi kanye amathawula baguqulelwa kancane njalo njengoba singathanda, abasebenzi bantuleka ikakhulukazi wazizwa ekamelweni lokudlela. Ngokuvamile, izisebenzi friendly, inhlonipho ngangokunokwenzeka zama nezimfuno isivakashi ngasinye.
Beach lemizuzu 10-15 kusukela ehhotela. Izivakashi uqaphele ukuthi kukhona ngokwanele ehlanzekile, ulwandle ecacile nge kwelanga emnene. Beach Luhle imindeni nezingane: ngisho at amabanga amade uma liya kusuka osebeni ayijulile ngokwanele. Yiqiniso, kule sizini impela eningi izivakashi, kodwa kwanele ukuba kudlule kancane kwesokunxele noma kwesokudla njengoba uqiniseka ukuthola indawo ethule kanye nalezo ezizimele.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini ukuzijabulisa ngokwanele izingane bobudala obungefani, ngenkathi ungakwazi baqashe imishini ezemidlalo, imishini for imali eyengeziwe ungakwazi ukuqasha sunbed futhi isambulela.
Uma bajwayele ukuphumula zokungcebeleka zikanokusho emahhotela aphambili, ubungeke uthanda isivakashi ndlu "Izintandokazi Beach". Sithanda ukukukhumbuza ukuthi Dzhemete - elula resort edolobheni, elingenalo frills, indlu isivakashi futhi akukho yinkimbinkimbi ezahlukene. Lena inketho lula futhi engabizi for a holiday umkhaya wehlise umoya. Uma uhlela ukuba bachithe isikhathi sabo esiningi olwandle, futhi ukuvakashela izindawo enhle yokukhulekela kule ndawo, futhi kulelo gumbi emuva kuphela ubuthongo futhi ukuphumula, sibheke kabanzi ngalokhu ehhotela.
Iholide Incredible e Iceland
Kokudlala zoo Barnaul
Ukuvakashela Nha Trang ngoDisemba: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ukubuyekezwa
Kungani kuyingozi ukuya safari?
Uhambo ezithakazelisayo Leningrad Region
Amahhotela Zakynthos. Emahhotela aphambili e Zakynthos. Zakynthos Island - amahhotela
"Bifidumbacterin": imicabango yabantu kwabazali odokotela
Skirt Trendy 2013 abaklami abadumile